အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယအနေနဲ့ကျူးကျော်ခဲ့ဖူးပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ရန်သူ၏အင်အားကိုအသုံးပြုရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်: Rajnath Singh က | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယအနေနဲ့ကျူးကျော်ခဲ့ဖူးပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ရန်သူ၏အင်အားကိုအသုံးပြုရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်: Rajnath Singh က | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယအနေနဲ့ကျူးကျော်ခဲ့ဖူးပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ရန်သူ၏အင်အားကိုအသုံးပြုရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်: Rajnath Singh က | အိန္ဒိယသတင်း
ဆိုးလ်: ပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Rajnath Singh က အိန္ဒိယသမိုင်းတစ်ဦးကျူးကျော်ခဲ့ဖူးပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ရန်၎င်း၏အာဏာကိုသုံးစွဲဖို့ချီတုံချတုံမကြာသပတေးနေ့တွင်ပြောကြားသည်။
"အိန္ဒိယသမိုင်းတစ်ဦးကျူးကျော်ခဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သို့သော်အိန္ဒိယသူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ရန်၎င်း၏တပ်ဖွဲ့များသုံးစွဲဖို့ချီတုံချတုံမယ်လို့မဆိုလိုပါ, "Singh က '' အထူးအစည်းအဝေးမှာကပြောပါတယ် ဆိုးလ်မြို့။ ကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ '' တောင်ကိုရီးယား၏မြို့တော် .
ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ခိုင်ခံ့စေဆက်ဆံရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံဘေဂျင်းမြို့မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရောက်ရှိလာသူပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းကာကွယ်ရေးသံတမန်ရေး "၏မူဝါဒမှာ tool များ၏အကွာအဝေးတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းအလေးပေး အိန္ဒိယ "။
အိန္ဒိယသမိုင်းတစ်ဦးကျူးကျော်ခဲ့နဲ့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှသိရသည်။ သို့သော်အိန္ဒိယတှနျ့ဆုတျမယ်လို့မဆိုလိုပါ ... https://t.co/e39QI7jjHN
- Rajnath Singh က (@rajnathsingh) 1567649137000
ဝန်ကြီးချုပ်၏နောက်ခံလူ Narendra Modi အိန္ဒိယ၏အစွန်အဖျားများအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှအရေးပိုပေးခြင်း - - က "အိန္ဒိယ၏ပထမဦးဆုံးရပ်ကွက်အတွင်း" တွင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဒီချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ရှုထောင့်အုပ်စုများအတွက်၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကြောင်းအလေးပေး မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအသင်း (IORA) နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် (ဘင်းမ်စတက်) ၏ multisectoral နည်းပညာနှင့်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု Initiative ပေါင်းသီရိလင်္ကာနှင့်မော်လ်ဒိုက်နှင့်အတူအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လေ့ရေကြောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရေကြောင်းဒိုမိန်းအသိအမြင်တိုးတက်စေရန်။
ထို့အပြင်သူသည်ဒေသတွင်း၌တစ်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဗိသုကာတည်ဆောက်အသစ်ဂါထာကိုပေး၏ အင်ဒိုပစိဖိတ် .
"ကျနော်တို့ရာစုနှစ်များစွာများအတွက်အတွေးနှင့်အိန္ဒိယမူဝါဒများသွင်ပြင်လက္ခဏာငါးအခြေခံမူ၏အခြေခံပေါ်မှာအတူတူအလုပ်လုပ်နေလျှင် - Samman (လေးစားမှု) ၏အခြေခံမူ, Samvad (တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး) Sahayog (ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု), Shanti (ငြိမ်းချမ်းရေး) နှင့် Samriddhi (စည်းစိမ်ချမ်းသာ ), ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုစိတ်ချပါဖြစ်ပါတယ် "ဟုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Tweet လုပ်ခဲ့။
"ကျနော်တို့ကအာဆီယံ၏အဓိကဗဟိုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုံညီမျှလက်လှမ်းနှင့်တကွ, အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဗိသုကာထောက်ခံ" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
Singh ကထပ်မံအားလုံးပါတီများအတူတကွငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရန်ဆောင်ရွက်အဖြစ်သူတရားစွဲဆိုမှုများ၏ရလဒ်ကို ပတ်သက်. အကောင်းမြင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
တစ်ဖိုရမ်အပေါ်ဆွေးနွေးမှုများများအတွက်အစိုင်အခဲအခြေခံများကိုတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းဘက်ပေါင်းစုံလုံခြုံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်သည့်ဆိုးလ်အတွက်ကာကွယ်ရေးအပေါ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး "," ငါမှာစကားပြောဆိုရန်ငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်ဘို့ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရမှကျေးဇူးတင် " ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးများ၏အရေးပေါ်ပြဿနာများ, "ဟုပြောသည်။
Singh ကအိန္ဒိယနှင့်တောင်ကိုရီးယားရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အိန္ဒိယကနေအရှေ့အာရှမှတိုးချဲ့ကျော် 2000 နှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်ကိုရီးယားမှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, သူကပြောသည်။
အဆိုပါဝန်ကြီးတောင်အာရှ၏နှစ်ခုသောလူမျိုးဒဏ္ဍာရီဘုရင်မကြီးနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါမိသားစုဆက်ဆံရေးများကဆက်နွယ်နေခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည် Heo Hwang-ok သူကိုဘုရင်က Suro လက်ထပ်ဖို့ Ayodhya ကနေခရီးထွက်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ Gimhae အတွက်ဂါယာ။
ဤနေရာတွင်မိမိအဆိုက်ရောက်မနေ့ကပေါ်၌ Singh ကတောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်လီ nak-နှာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များကို၏ကျယ်ပြန့အမှာစကားပြောကြားသည်။
နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည်လည်း "အိန္ဒိယအဘို့အရှေ့ပေါ်လစီ" တောင်ကိုရီးယားနှင့်၏ "New South မူဝါဒက" တူညီသောအမြင်များနှင့်အတူတူပင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမျှဝေကြောင်းစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူမှတ်ချက်ချသည်။ အထူးမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်း 2015 ဖို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့အင်ဒိုကိုးရီးယားဆက်ဆံရေးခေတ်သစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်။
ဝန်ကြီးချုပ် Lee ကမျှော်လင့်ချက်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့သံတမန်ရေးအရမူဝါဒ၏ဒေသများရှိအိန္ဒိယနှင့်အတူတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ကာကွယ်ရေး၏ဝန်ကြီးများအကြားမနေ့ကရဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းသူတို့လည်းစီအီးအိုဖိုရမ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မှာတိုးလာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်အစေခံမယ်လို့မြင်ကွင်းကို shared ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အသီးသီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နှင့်ကက်ရှမီးယားမှာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအဘို့မိမိတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Singh ကလညျးမိမိအဆွေတော် Jeong Kyeong-Doo, အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ရသည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားပေးနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဖက်စလုံး၏ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအကြားဆောင်ရွက်ချက် (B2G) တို့အကြားအစည်းအဝေးတစ်ခုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖိုရမ်တစ်ခုမှာယနေ့တက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ် အိန္ဒိယနှင့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအကြား။
အိန္ဒိယတောင်ကိုရီးယားနှင့်အတူစစ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အစိုင်အခဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲသည်အိန္ဒိယကြည်းတပ်ပြီးသား K-9 Vajra အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ Larsen နှင့် Toubro နှင့်အတူပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့ဟောင်ဝစ်ဇာ propelled ထဲမဝငျသိရသည်။
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယစက်ရုံများ၏လုံခြုံရေးအဆင့်ကိုဘာလဲ | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: | န်ကြီးချုပ်မိုဒီမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ Zakir Naik ပြဿနာဆြေးြေိံး အိန္ဒိယသတင်း